नेपाल आज | गौर हत्याकाण्डका १३ वर्ष, छानबिन कहिले ? ( भिडियोसहित)
गौर हत्याकाण्डका १३ वर्ष, छानबिन कहिले ? ( भिडियोसहित)
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको मानव नरसंहारको सम्झना फेरि भएको छ । यति ठूलो घटना भएको १३ वर्ष वितिसक्दा पनि कहिं कतैबाट यसको छानबिन भएको छैन । अहिले बिभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणबाट मानवताविरोधी यो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरमा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ ।
मधेश मामिला विज्ञ एवम विश्लेषक डा. राजेश अहिराज पनि गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना मान्न तयार छैनन् । यो नितान्त आपराधिक घटना भएकाले यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
डा. अहिराजसंग भएको संवादका प्रमुख अंश यस्ता छन् :
क ) गौर हत्याकाण्डसहित मधेशमा बिभिन्न कालखण्डमा मारिएका एक–एक लाशको हिसाब हुनुपर्छ । जनताका छोराछोरीलाई मारेर सत्ताको स्वाद लिनेहरु उम्किन पाउँदैनन् ।
ख ) प्रदेश २ सरकारकै कतिपय मन्त्री गौरकाण्डमा संलग्न भएका हुनसक्छन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि हुनसक्छन् । छानबिन गरेर यथार्थ पत्ता लगाउनुपर्छ ।
ग ) २०६२/०६३ सालयता मधेशमा ११८ जना शहीद भए । मधेशको नाममा राजनीति गर्नेहरुले व्यक्तिगत र पारिवारिक लाभ उठाए, मधेशका जनताले के पाए ?
घ ) मधेशको समस्या राजनीतिक होइन, सामाजिक चेतनाको विषय हो । सामाजिक जागरणका माध्यमबाट त्यहाँका समस्या हल गर्नुपर्छ ।
ङ ) मधेशको नाममा व्यक्ति केन्द्रीत, जात केन्द्रीत, समुदाय केन्द्रीत राजनीति गर्नेहरु अब लेखिटिन्छन् । मधेशमा नयाँ शक्ति जन्मिने निश्चित छ ।
च ) प्रदेश २ सरकार संघीयता विरोधी हो । तत्काल यसलाई विघटन गरी ४० प्रतिशत पहाडी समुदायलाई राखी नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्न सम्भव होला ।
छ ) जसले आफनो पार्टीबाट ‘मधेश’ भन्ने शब्द हटाए, उनीहरुलाई प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्नुपर्ने भएको छ । राजपा र समाजवादी पार्टी सुविधाभोगी, गैर जिम्मेवारहरुको झुण्ड हो । यीनिहरुले देश र मधेशको हीत गर्दैनन् ।
ज ) प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री झूठ मात्र बोल्छन् । फर्जी बिल बनाउन पाइएन, भ्रष्टाचार गर्न पाइएन, अनियमितता छताछुल्ल हुने भयो भनेर कर्मचारीलाई गाली गर्न पाइन्छ ? मुख्यमन्त्रीले आफना करतुत रोक्ने कर्मचारीलाई संघीयताविरोधी भनेर झूठ कुराको खेती गरिरहेका छन् ।
झ ) राजपा र समाजवादी पार्टी दुवै एकता गर्नुछ भनेर आफनो कमजोरी छोपिरहेका छन् । राजपाका ६ अध्यक्षलाई चक्रिय प्रणालीबाट खानु छ भने समाजवादीलाई जनतासामु मुख देखाउन नसकिने परिस्थितिबाट जोगिनु छ ।
ञ ) उपेन्द्र यादव र बाबुराम विध्वंसकारी नेता हुन् । यीनिहरुको अनुहार रगतले लत्पतिएको छ । जनतामा अराजकता मच्चाएर सरकारलाई प्रहार गरेर राज्य कमजोर पार्ने योजनामा यी दुवै नेता लागेका छन् ।
ट ) समाजवादी पार्टी ‘नेगेटिभ फोर्स’ हो, यसले विध्वंस मात्र मच्चाउँछ ।
ठ ) कांग्रेसलाई बाहिरका शक्तिले जति नोक्शान पुर्याएका छन् त्यो भन्दा दोब्बर सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र विजय गच्छादारले पुर्याएका छन् ।
ड ) वास्तवमा एक देश, दुई दल र तीन प्रदेश नै हाम्रा लागि उत्तम हो ।
ढ ) राप्रपाले राजसंस्था फर्काउने कुरा दुनियामा कसैले पत्याउँदैन ।
ण ) तीन चार वर्ष भित्र कि यो देश गृहयुद्धमा फँस्छ कि सैनिक शासन सुरु हुन्छ ।